आज शनिबार राशीफल अनुसार तपाईँको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुस् - Sacho Post
आज शनिबार राशीफल अनुसार तपाईँको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुस्
२०७७ भाद्र २०, शनिबार ०८:५३ बजे
वि.सं. २०७७ साल, भाद्र महिना, २० गते, शनिवार, शुद्धआश्विन कृष्ण (अनलागा) तृतीया, रेवती नक्षत्र, मीन राशिको चन्द्रमा, गण्ड योग, विष्टि (भद्रा) र बब करण, प्रमादी संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : भद्रा करण बिहानको राती ०१.२४ बजेदेखि दिनको ०२.२३ बजेसम्म, धनिष्ठा पञ्चकको समाप्ति मध्यरात्रीपछि ०१.२४ बजेसम्म, गातिला, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : सोह्रश्राद्धअन्तर्गत चतुर्थी श्राद्ध, इन्द्रध्वजपातन (नानीचाया)
आकस्मिक खर्च बढ्नाले आर्थिक संकट पर्नसक्छ । आम्दानीका अवसर न्यून रहेको छ । उठ्नुपर्ने रकम तत्काल हातलागी नहुन सक्छ। धनमाल सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला। आज सरसापटमा लगानी गर्नु उपयुक्त समय छैन ।
उद्योग र व्यापारमा न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ला । गरेका काम ढिला गरी सम्पादन हुनेछ । यद्यीप, विगतका कर्मको उचित फल प्राप्त हुनेछ। अचल धनको उपयोगबाट आंशिक फाइदा उठाउन सकिनेछ।
नाम दाम र प्रतिष्ठा कमाउने समय छ । लगनशीलताले आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ।
रोकिएका काम पुनः शुरु गर्ने समय छ । फाइदा सामान्य भए पनि तारिफयोग्य काम थालनी हुनेछ। दिगो फाइदाको लागि लगानी गर्ने समय छ । व्यवसाय विस्तार गर्ने समय छ।
भविष्यका लागि काम गर्ने समय छ। आफन्त र शुभचिन्तकहरू जुट्नाले आस मारेको फल पुनः प्राप्त हुन सक्छ। पहिले बिग्रिएको काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ उठाउन सकिनेछ।
परिस्थिति प्रतिकूल रहे पनि मनोरञ्जनको समय छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। भौतिक साधन जोड्ने योग छ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। व्यवसायिक यात्रा हुनसक्छ । परिवार र साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ ।
लगनशीलताले अवसर दिलाउनेछ। बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। भविष्यका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ ।
महत्वांकाक्षी योजना राख्दा दुःख पाइनेछ। नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। बुद्धिको उपयोगले फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। मिहिनेत गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुनेछ।
एउटै काम दोहोर्याएर गर्नुपर्ला । बेसुरमा दिइएको वचन दिने बानीले दुःख पाइएला । अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिनेहरू कमै भेटिनेछन्। छिमेकी र आफन्तहरु पनि टाढिनेछ । गोपनीयता ख्याल राख्नुहोला ।
चिताएका काम सम्पादन हुने योग छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। गरिएका कर्मबाट छोटो समयमै उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। विशेष उपहार हातलागी होला। कृषिमा कामको चाप बढ्नेछ। व्यापारमा समस्या देखिए पनि धन आर्जन प्रशस्तै हुनेछ।
हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला। धेरै मिहिनेत गर्दा मात्र चिताएको काम बन्नेछ। बोलीको प्रभाव कमजोर रहनेछ।